के गर्ने यदि तपाईंको कुकुरले धुवाँ इनहेल गर्दछ - राम्रो एयर टीम द्वारा K9 मास्क
घर > वायु प्रदूषण कुकुर ब्लग > के गर्ने यदि तपाईंको कुकुरले धुवाँ इनहेल गर्दछ
धुवाँ इनहेलेसन परिभाषित गर्दै
धुवाँ इनहेलेसन चोटहरु तिम्रो कुकुर मा ठूलो वा थोरै मात्रामा धुम्रपानको जोखिमको साथ देखा पर्न सक्छ। आगोले बिभिन्न हानिकारक तत्त्वहरू उत्पादन गर्दछ, जसमा प्रत्येकले घरपालुवा जनावरको वायुमार्ग, फोक्सो र समग्र कल्याणलाई असर गर्न सक्छ।
धुम्रपानको इनहेलेसनमा भूमिका खेल्ने कारकहरू:
कार्बन मोनोअक्साइडकार्बन मोनोअक्साइड एक रंगहीन, गन्ध रहित ग्यास हो जुन आगोमा उत्पन्न हुन्छ। जब कार्बन मोनोअक्साइड साँसिएको हुन्छ र रक्तप्रवाहमा प्रवेश गर्दछ, यसले शरीरको अ organs्ग र टिश्युहरूमा अक्सिजन पुर्‍याउने क्षमतामा हस्तक्षेप गर्दछ।
हाइड्रोजन साइनाइड। प्लास्टिक र अन्य सिंथेटिक सामग्रीहरू जलाउँदा यो पदार्थ छोडिन्छ। कार्बन मोनोअक्साइड जस्तै हाइड्रोजन साइनाइड शरीरको अक्सीजनको प्रयोगमा हस्तक्षेप गर्दछ।
रासायनिक इरेन्ट्स। धुँवामा रासायनिक इरन्टेन्ट्सको संख्या हुन्छ। यी ईन्टरनेन्ट्सले हावामा सूजन र संकुचन, साथै अन्य फोक्सो क्षतिलाई ट्रिगर गर्न सक्दछ। धुवाँमा फेला परेका जलेर जलाउन सकिने पदार्थहरूको आधारमा फरक पर्न सक्छ।
थर्मल चोट धुवाँ भित्र रहेको गर्मीले वायुमार्ग र फोक्सो भित्र जल्न लिन सक्छ, गम्भीर सूजन र सूजन ट्रिगर गर्दछ।
धुवाँ इनहेलेसनको स What्केत के हो?
धुवाँ साँसको स vary्केतको संकेतहरू फरक हुन्छन्, कति कुवाँ धुवाँको स्थितिमा रहन्थ्यो, धुँवामा के केमिकलहरू थिए, इत्यादिमा भर पर्दछ। छोटो अवधिका लागि थोरै धुवाँको संपर्कमा आएका एउटा घरपालुवा जनावरमा धेरै चीज हुन्छ। लामो समय अवधिको लागि अत्यन्त धुवाँको कोठामा सीमित कुकुर भन्दा भिन्न क्लिनिकल संकेतहरू।
"धुवाँ इनहेलेसनको सबैभन्दा सामान्य लक्षणहरू श्वसन संकेतहरू हुन्।"
तातो र धुवाँ भित्र निमिष्ति आँखालाई पनि महत्वपूर्ण क्षति हुन सक्छ। कुकुरहरू दुखाइको कारणले स्क्विन्ट हुन सक्छन्, तेस्रो पलक आँखा माथि रहन सक्छ, र तपाईंले सूजन र आँखाको लाली पनि देख्न सक्नुहुन्छ (नेत्रश्लेष्मलाशोथ)।
जलेको अनुहार र थूथन वरिपरि देख्न सकिन्छ। यी जलेको छाला, वा reddened, सूजनयुक्त क्षेत्रको रूपमा देखा पर्न सक्छ। यदि नासिका जलाइएको छ भने, तपाईंले नाकको स्राव वा नाकको भित्र देखिने छालाहरू देख्न सक्नुहुन्छ।
यदि धुवाँ इनहेलेसनको कारण दिमाग अक्सिजनबाट वञ्चित छ भने घरपालुवा जनावरहरूले न्यूरोलजिक संकेत देखाउन सक्छन्। न्युरोलोगिक संकेतहरू कार्बन मोनोअक्साइड इनहेलेसनको साथ सामान्य छ। चिह्नहरूमा कमजोरी, अटाक्सिया (बिग्रेको समन्वय, वा मादक पदार्थको रूपमा हिड्दै), दौरा, र / वा कोमा समावेश छन्। कुकुरहरु अत्यधिक drool वा बान्ता हुन सक्छ। कार्बन मोनोअक्साइड ईन्हेलेसन भएको कुकुरहरूले पनि गमको चेरी रातो रंग बिच्छेदनको विकास गर्छ।
मेरो पशुचिकित्सकले मेरो घरपालुवा जनावरमा कुन कसो टेस्ट प्रदर्शन गर्दछ?
तपाईंको पशुचिकित्सक सायद नाडी ओक्सिमेस्ट्री, रक्त कार्य, र छातीको रेडियोग्राफ (एक्स-रे) को साथ शुरू हुनेछ।
A पल्स ऑक्सीमीटर एक उपकरण हो जुन तपाईंको कुकुरको रगत अक्सिजनेशन मूल्या assess्कन गर्न प्रयोग गरिन्छ। यसले तपाइँको कुकुरको फोक्सो कत्तिको प्रभावकारी ढंगले कार्य गरिरहेको छ र तपाइँको कुकुरले आफ्नो अ oxygen्ग र टिश्युहरूमा अक्सिजन पुर्‍याउँदैछ कसरी प्रभावकारी रूपमा निर्धारण गर्न मद्दत गर्दछ। पल्स ऑक्सीमेट्री भने प्रभावहीन हुन सक्छ, कार्बन मोनोअक्साइड एक्सपोजरको अवस्थामा।
Bloodwork असामान्यताहरूले तपाईंको पशुचिकित्सकलाई तपाईंको घरपालुवा जनावरको फोक्सोको चोटहरूको गम्भीरता निर्धारण गर्न मद्दत गर्न सक्छ। Bloodwork खोजहरु तपाइँको घरपालुवा जनावर को लागी उपचार निर्णयहरु लाई मार्गदर्शन गर्न सक्छ, जबकि तपाइँको घरपालुवा जनावरको रोगको लाग्ने पूर्वानुमान को राम्रो अनुमान गर्न जानकारी प्रदान गर्दछ।
रेडियोग्राफहरू (एक्स-रे) तपाईंको पशुचिकित्सकलाई फोक्सोको क्षतिको हद हो भनेर निर्धारण गर्न अनुमति दिनुहोस् जुन भएको छ। धेरै जसो केसहरूमा यी परिवर्तनहरू तुरून्त देख्न सकिन्छ। धेरै जसो केसहरूमा, यी परिवर्तनहरू प्रारम्भिक चोटपटक पछि-48-72 घण्टा सम्म प्रगति गर्न जारी रहनेछ। पहिलो hours२ घण्टाको उपचारको क्रममा रेडियोग्राफहरू प्राय: धेरै पटक दोहोरिन्छन्, तपाईंको पशुचिकित्सकलाई तपाईंको घरपालुवा जनावरको फोक्सोको क्षतिको निरीक्षण गर्न र आवश्यकता अनुसार उपचार समायोजन गर्नका लागि एक तरिका प्रदान गर्दछ।
An इलेक्ट्रोकार्डियोोग्राम (ECG) पनि प्रदर्शन गर्न सकिन्छ, तपाईंको घरपालुवा हृदय गति र ताल मूल्यांकन गर्न। अक्सिजन अभावले मुटुको हानी हुन सक्छ, जुन ECG प्रयोग गरेर पत्ता लगाउन सकिन्छ।
धुवाँ इनहेलेसन र आगोसँग सम्बन्धित ताप प्रायः आँखाको छालो हुन्छ। तसर्थ, तपाईंको पशुचिकित्सकले तपाईंको कुकुरको आँखा मूल्यांकन गर्न र कर्नेल अल्सरेशन जस्ता चोटपटकलाई रद्द गर्न कोर्नियल दाग वा अन्य नेत्र रोग परीक्षण गर्न सक्छ।
धुवाँ इनहेलेसन कसरी उपचार गरिन्छ?
धुवाँ इनहेलेसनको उपचार तपाईको कुकुरको संकेतको गम्भिरतामा निर्भर गर्दछ। प्रायः जसो चोटपटकका चोटहरू धुवाँको इनहेलेसनको साथ देखी 48 72-72 घण्टा सम्म बढ्छ; तसर्थ, तपाईं यो आशा गर्न सक्नुहुनेछ कि तपाईंको कुकुर सम्भवत अस्पतालमा भर्ना हुनेछ र कम्तिमा XNUMX२ घण्टाको लागि निगरानी गरिन्छ।
"धुवाँ इनहेलेसनको उपचार तपाईको कुकुरको संकेतको गम्भिरतामा निर्भर गर्दछ।"
प्रारम्भिक चरणहरूमा, धुवाँ इनहेलेसनको प्रायः जसो केसहरू अक्सिजन थेरापीद्वारा उपचार गरिन्छ। अक्सिजनले रक्तप्रवाहबाट कार्बन मोनोअक्साइड खाली गर्दछ, शरीरको ऊतकहरूमा अक्सिजन वितरण सुधार गर्दछ। तपाईंको कुकुरलाई एक अक्सिजन केजमा राखिएको हुन सक्छ, जहाँ ध्यान केन्द्रित अक्सिजन यस्तो तरिकामा डेलिभर गर्न सकिन्छ जुन अन-तनावपूर्ण हो। यदि तपाईंको पशुचिकित्सकलाई अक्सिजन केज छैन भने, तिनीहरूले फेसमास्क वा 'फ्लो-बाय' अक्सिजन (तपाईंको कुकुरको अनुहार नजिकै एउटा अक्सिजन ट्यूब होल्डिंग) मार्फत अक्सिजन प्रबन्ध गर्न सक्दछन्। यदि तपाईंको कुकुरसँग अत्यधिक माथिल्लो वायुमार्गको सुन्नि छ जसले सास रोक्छ, तपाईंको पशुचिकित्सकले अक्सिजन प्रबन्ध गर्न ट्रेकीओटोमी ट्यूब (श्वासनलिकाको माध्यमबाट घुसाइएको ट्युब) राख्नुपर्दछ।
तपाईको पशु चिकित्सकले तपाईको कुकुरमा अन्तर्देशीय (IV) क्याथेटर राख्दछ। यस क्याथेटरले IV फ्लुइडहरू व्यवस्थापन गर्न अनुमति दिन्छ ताकि फोक्सोलाई चिसो राख्न र जटिलताको खतरा कम गर्न। थप रूपमा, तपाईंको कुकुर धुवाँ इनहेलेसन पछि पहिलो केही दिनको लागि पानी पिउन अनिच्छुक वा असमर्थ हुन सक्छ, त्यसैले IV फ्लुइड डिहाइड्रेशन रोक्नको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ।
धुवाँ इनहेलेसन प्रायः दर्दनाक जलेको परिणाम हुन्छ, त्यसैले तपाइँको पशु चिकित्सकले तपाइँको कुकुरलाई पनि दुखाइ दिने औषधी दिन्छ। प्रभावित कुकुरहरूलाई सामान्यतया आरामदायी राख्नको लागि ईन्जेक्शन दुखाइ औषधि दिइन्छ। मौखिक एनेस्थेटिक rinses पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ, यदि मुख भित्र जलाइएको छ भने।
"धुवाँ इनहेलेसन प्रायः दर्दनाक जलेको परिणाम हुन्छ, त्यसैले तपाइँको पशु चिकित्सकले तपाइँको कुकुरलाई पनि दुखाइ दिने औषधी दिन्छ।"
तपाईंको कुकुरले पनि एयरवे खुला राख्न मद्दत गर्न ब्रोन्कोडाइलेटरहरू प्राप्त गर्न सक्दछ, आवश्यक छ भने। केहि केसहरूमा एन्टिबायोटिकले दोस्रो इन्फेक्सनको उपचार गर्न आवश्यक पर्न सक्छ जुन फोक्सोको क्षति पछि हुन सक्छ।
केहि अवस्थाहरूमा कुकुरहरूलाई थप सहयोगी हेरचाह आवश्यक पर्दछ, जस्तै नेबुलीकरण र कुपेज। यी तरिकाहरू सीधै फोक्सोमा औषधी पुर्‍याउन र फोक्सोको स्रावहरू हटाउन प्रयोग गर्न सकिन्छ।
धुम्रपान इन्हेलेसनको साथ निदान के हो?
धेरै जसो कुकुरहरुमा धुवाँ इनहेलेसनको राम्रो निदान हुन्छ। बहुविध अध्ययनहरूको अनुसार छालाको जलेको बिना जनावरहरूको लागि अनुमानित बाँच्न दरहरू लगभग% ०% हुन्छन्।
कुकुरहरू जुन न्युरोलोगिक संकेतहरू, विस्तृत छाला जलेको, वा जसको अवस्था अस्पतालको भर्नाको दोस्रो दिनमा बिग्रन्छ सामान्यतया नराम्रो परिणामहरूको साथ प्रस्तुत गर्दछ। रोगनिदान यो बिरामीहरूको लागि सुरक्षित छ।